Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည် လုံခြုံရေး စိုးရိမ်နေရဆဲ
ရခိုင်ပြည် လုံခြုံရေး စိုးရိမ်နေရဆဲ
ပဋိပက္ခ ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ တနေရာ (ဓာတ်ပုံ – ခင်သြ / ဧရာဝတီ)
အကြမ်းဖက်မှု အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံများမှာ လုံခြုံရေး အတွက် စိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်း ယင်းဒေသများသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့သော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား အဖွဲ့ဝင်များက ပြောသည်။
အဓိကရုဏ်းများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနှင့် စစ်တွေမြို့များတွင် စာသင်ကျောင်းများနှင့် ဈေးဆိုင် အများစု ပြန်မဖွင့်နိုင်သေးသကဲ့သို့ တနေရာနှင့် တနေရာ ကူးသန်းသွားလာနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ထိုနေရာများသို့ သွားရောက် လေ့ လာခဲ့သူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား အဖွဲ့မှ မမီးမီး က ပြောသည်။
“အခုအချိန်မှာတော့ တဘက်နဲ့ တဘက် လုံးဝ ကူးသန်းသွားလာလို့ မရသေးပါဘူး။ စစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် မွတ်စလင် ရပ်ကွက် ဘေး မှာ စစ်တပ်ကို ချထားတယ်၊ အထဲကလူ အပြင်ထွက်လို့မရသေးသလို အပြင်ကလူလဲ အထဲဝင်လို့ မရပါဘူး”ဟု မမီးမီး က ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
မမီးမီးနှင့် မနီလာသိန်းတို့သည် ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ စစ်တွေ၊ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်များရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများ နှင့် ကျေးရွာ တချို့ကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့ကြသည်။
စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင်ရှိသော ရခိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် အစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှု ထိထိရောက်ရောက် မတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမှလာသော ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့များက လာရောက်လှူဒါန်းမှုများ တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မြို့ပြင်ရှိ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင်တော့ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အစိုးရတို့က အကူအညီပေးနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ သို့သော် လုံလောက် သည့် အနေအထားကို မတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောဆိုသည်။
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မြို့ပေါ်များရှိ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အများစုနေထိုင်ရာ ကျေးရွာ တချို့တွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းများ စတင် လုပ်ကိုင်နေသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်းလည်း မမီးမီး ကပြောသည်။
မွတ်စလင်လူမျိုးအများစုနှင့် စုဖွဲ့ထားသော အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (NDPD) ဗဟို ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်ကျော် က မောင်တောမြို့အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍“အခုတော့ နည်းနည်းတည်ငြိမ်သွားတယ်၊ လူတွေက စိုးရိမ်နေကြတဲ့ အတွက် အချို့က ထွက်တယ်၊ အချို့က မထွက်ဘူး၊ အဲဒီလိုမျိုးတော့ ရှိနေသေးတယ်”ဟု ပြောပြသည်။
မောင်တော ဒေသခံများကလည်း မြို့ပေါ်နှင့် မြို့စွန်နေရာများတွင် အစိုးရက လုံခြုံရေး တင်းကျပ်စွာ ချပေးထားသဖြင့် လုံခြုံရေး စိုးရိမ်မှု လျော့ကျသွားသော်လည်း မြို့ပြင်ရှိ လယ်ယာမြေများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် စိုးရိမ်နေကြဆဲ ဖြစ်သဖြင့် လုပ် ငန်းခွင် ပြန်ဝင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပြောသည်။
“ဒီလယ်မြေတွေက ဘင်္ဂါလီရွာတွေနားမှာပဲ နီးနီးကပ်ကပ် ရှိနေတဲ့အခါကြတော့ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးတဲ့ လူတွေအတွက် အချိန်မရွေး အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တယ်လေ၊ ဒါကြောင့် လယ်ထဲဆင်း မလုပ်နိုင်ကြသေးတာပေါ့”ဟု ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
မောင်တောတွင် ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့က မိုးကြီး၊ ရေလျှံမှုဖြစ်ကာ ဒုက္ခသည်စခန်းများပါ မြှုပ်သွားသဖြင့် ဒုက္ခသည်များကို နေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီး ယနေ့တွင် ပုံမှန် အနေအထားသို့ ပြန်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း မောင်တောမြို့ အလိုတော်ပြည့် ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးမဏိသာရ က ဧရာဝတီသို့ မိန့်သည်။
“ကျောင်းတွေ၊ ဈေးတွေ မဖွင့်နိုင်ကြသေးဘူး၊ ဦးပဉ္ဇင်းတို့ မြင်တဲ့ တွေ့တဲ့အတိုင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် လူတွေက ဒီအဖြစ်အပျက်ကို စိုးရွံ့ကြောက်လန့် နေကြတုန်းပဲ၊ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ အချိန်ယူရဦးမယ်”ဟု ဆရာတော်က မိန့်သည်။
အဓိကရုဏ်းအခြေအနေများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ယခုလ ၈ ရက်နေ့မှစ၍ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားသောနေရာများ နှင့် ထိစပ်နေ သည့် မြို့များတွင် ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ ပြတ်တောက်ခဲ့သကဲ့သို့ ဈေးဆိုင်များလည်း ပိတ်သိမ်းခဲ့ကြရပြီး အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသော ညမထွက်ရအမိန့်နှင့် အရေးပေါ်ကြေညာချက် ပြန်ရုပ်သိမ်းချိန် အပါအဝင် ဒေသပြန်လည်တည်ငြိမ်နိုင်မည့် ကာလကိုပင် မခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပေ။
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရက ဖွဲ့စည်းထားသော ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြိုင်က ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေတည်ငြိမ်နေပြီ ဖြစ် ကြောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများလည်း ပြန်ဖွင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သို့သော်လည်း တဘက်နှင့် တဘက် စိုးရိမ်စိတ်များကြောင့် ကလေး များကို ကျောင်းသို့ မပို့နိုင်သေးခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်နေသော ရခိုင် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ALD) ပါတီမှ ဦးမျိုးကျော်ကလည်း“ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်မှာတော့ လူတွေက အကုန်လုံး ထိတ်တလန့်လန့်နဲ့ ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ၊ တယောက်နဲ့ တယောက် အယုံအကြည် မရှိကြတော့ဘူးဗျ၊ အဲဒီတော့ ဘယ်သူမှ အလစ်ပေးလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတာပေါ့။ သူတို့တွေ မြို့ထဲ တက်လာရင်လည်း ပြန်လွှတ်၊ ကျနော်တို့တွေလဲ အဲဒီဘက်ကို ဖြတ်မသွားရဲတဲ့ အနေအထားပါ”ဟု ပြောသည်။
မြေပုံမြို့တွင်လည်း မြို့ပေါ်ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် ရခိုင်သူဋ္ဌေးအိမ်များကို မီးရှို့မည်ဟု သတင်းရရှိသဖြင့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ နေ ထိုင်သော ကံသာယာ ရပ်ကွက်သို့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့များက သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ လူစုလူဝေးများပြုလုပ်နေသဖြင့် ဇွန်လ ၂၇ ရက်နှင့် ၂၈ ရက်နေ့များတွင် ၂ ရက် ဆက်တိုက် သေနတ် ပစ်ဖောက်၍ လူစုခွဲခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ယနေ့တွင်လည်း မြေပုံမြို့ပေါ်ရှိ စာ သင် ကျောင်းများ အားလုံး ပိတ်ထားသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 07:02
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည် လုံခြုံရေး စိုးရိမ်နေရဆဲ . All Rights Reserved